192.168.8.1 - Galitaanka Maamulka
cinwaanka IP 192.168.8.1 waa ciwaanka gaarka ah ee IP-ga gudaha Shabakadda Aagga Maxalliga ah, adiga oo keliya ayaa isticmaali kara cinwaankan IP-ga ah oo laguma isticmaali karo intarneedka. Waxaad isticmaali kartaa cinwaanka IP-ga 192.168.8.1 furitaanka guddiga maamulka kombiyuutarka iyo sameynta wax ka beddel yar oo ku saabsan qaababkeeda asalka ah. Wax yar oo ka mid ah wax ka beddelka noocaas ah waxaa ka mid ah beddelka ereyga sirta ah & magaca adeegsadaha, dejinta shabakadda, ku dar darbiga, & dejinta qalabka.
Waxaa jira shuruudo ay tahay inaan raacno si aan u galno ciwaanka IP-ga oo aan u samayno wax ka beddelka lagama maarmaanka ah. Waxa ugu muhiimsan waa inaad joogto agagaarka shabakada router ama aad gasho. Caqabadda ugu weyn ee ku saabsan ciwaanka IP-ga ayaa ah inaan laga heli karin WWW-da sidaas darteed waxay nagu qasbeysaa inaan joogno aagga shabakadda router si aan u wajahno interface-ka shabakadda. browserkayaga shabakadu waa inuu noqdaa mid adag (Google Chrome, Mozilla Firefox, iwm.) maadaama habkani u baahan yahay taageero HTML5 ah.
Waa in aad mar kale u habayso routerkaaga si aad u isticmaasho raaxo badan. Waxaa jira goobo badan oo aad ku dhejin karto guddiga maamulka ee router. Waxaad wax badan ka baran kartaa interneedka shabakadda.
waa maxay da'dayda hadda